15ka Buugaag ee ugu naxdinta badan abid | 2022 | Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn 15ka Buugaag ee ugu naxdinta badan abid | 2022
Isha sawirka: www.thelineup.com
Dadku badanaa waxay u maleeyaan in buugaagtu aysan noqon karin kuwo argagax leh. Filimadu waxay noqon karaan cabsi. Animations waxay dhiigaaga ka dhigi kartaa mid qabow. Sheekooyinka cirfiidka ee dabka dabku ka kacay ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan heebie-jeebies. Laakiin buugaag? Nah!
Buugaagtu kuma yeeli karaan inaad ka boodo maqaarkaaga. Hagaag, war baan kuu hayaa. Waxaa laga yaabaa inaad akhrido kuwa khaldan maxaa yeelay buugaagta naxdinta leh runtii waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan, bogagga u roga adduunka.
In kasta oo ay jiraan kumanaan buugaag argagax leh oo kuu diyaar ah inaad akhrido, maanta waxaan qori doonaa buugaaggii ugu naxdinta badnaa uguna cabsida badnaa abid.
Horrorku ma leeyahay Subgenres?
Naxdin dhexdeeda ah sida nooc, lix hoosaad waxaa mudan in la muujiyo.
Marka hore, waxaa jira sheekooyin gothic ah oo inta badan diiradda saaraya geerida iyo siyaabaha geeridu “u soo booqato”.
Marka labaad, sheekooyinka aan caadiga ahayn waxay ku lug leeyihiin jinniyo ama waxyaabo ka sarraysa qorshayaashooda taasina waxay umuuqataa mid aan la gaari karin sharraxaadda sayniska.
Marka saddexaad, sheekooyinka sixir -bararka, dhanka kale, waxay diiradda saaraan dhaqammada caadooyinka iyo dabeecadaha u muuqda shaydaanka.
Dhinaca dhaldhalaalka leh, waxaa jira sheekooyin khiyaali mugdi ah halkaas oo khiyaaliga lagu daro walxaha mugdiga qaarkood. Kani waa subgenre -ka afaraad.
Midda shanaad waa subgenre badbaadada waxaa loola jeedaa sheekooyinkaas oo jilayaasha ugu waaweyn ay eryan ama ugaarsadaan noole shar leh ama ifafaaleyaal.
Ugu dambayntii, cabsida sheekooyinka sayniska ayaa ah meesha laga naxo ee lagu soo bandhigo goob khiyaaliga sayniska.
Goorma ayay caan noqdeen buugaagtii ugu naxdinta badnayd?
Naxdin, oo ah nooc suugaaneed, ayaa la bilaabay in lagu aqoonsado ku dhawaad ​​qarnigii 18aad iyadoo ay soo bateen buugaagtii gothic. Sheekadan naxdinta leh ayaa inta badan ahayd “wax” ka dib Horace Walpolebuugga ' Qasriga Otranto.
Tan iyo markaas, qorayaashu waxay aad uga warqabaan nooca waxayna naftooda ugu dhawaaqaan inay yihiin qoraayaasha gothic. Si kastaba ha ahaatee, sheekooyin naxdin leh ayaa waligood jiray.
Iyo, tan ugu muhiimsan, cabsidu had iyo jeer waxay ahayd weligeedna waxay ahaan doontaa nooc soo jiita dadka. Waxay noogu yeertaa gacantooda mugdiga ah, timaha leh si ay u timaaddo, u soo dhowaada ilaa ay na nuugto oo aan aragno annaga oo argagaxsan laakiin aan doonayn inaan joojinno!
Akhri: 15 Buugaagta Fantasy -ka Ugu Fiican Adduunka | 2022
Maxaa sameeya sheeko naxdin leh oo wanaagsan?
Buug kasta oo naxdin leh ma wanaagsana. Buugga naxdinta leh ee wanaagsan waa inuu, macno ahaan, ku geeyaa xaqiiqda naxdinta leh ee buugga oo kugu kalliftaa inaad ku dhex noolaato inta aad akhrinayso - oo ay u badan tahay ka dib, riyooyinkaaga sida riyooyinka qarowga ah!
Buugaagta ugu naxdinta badan weligood waxay isku daraan kuwa caadiga ah, kuwa la yaqaan, iyo kuwa aaminka ah oo aan la filayn oo aan loo adkaysan karin. Intaa waxaa dheer, waxay naga dhigaysaa inaan danaynno jilayaasha dabadeedna, annaga oo ku dhibbanna iyaga!
Waa maxay buugaagta naxdinta leh ee ugu fiican ee la akhriyo?
Aad baan ugu xagliyaa halkaan laakiin waxaan si fiican u tooganayaa: Iftiiminta amiirka cabsida Stephen King waa buugaagta naxdinta leh ee ugu wanaagsan abid.
Waxay ka dhigaysaa qalbigaaga inuu seego lamaane malaha boqolaal garaac!
Waa maxay sheekada cabsida ugu fiican?
Waxaa laga yaabaa inaan raaco Dracula oo uu qoray Bram Stoker midkan.
Waxaan dhihi karaa waa Shining -ka laakiin markaa waxaan ka fikiray markii Dracula la qoray iyo naxdinta weyn ee ay matalaysay bulshada waqtigaas. Waxay ahayd sheeko aan hore loo sheegin! Waxayna argagax gelisay raadadkii hiddaha suugaanta.
Sidoo kale akhri: 15 Buugaagta Ugu Fiican Qorista | 2022 Waa Inay U Akhriso Qorayaasha
Yaa qora buugaagta naxdinta leh ee ugu fiican?
Fadlan ii oggolow inaan halkan ku raaco laba qoraa. Mid waa dhintay, midna waa nool yahay. Kii hore, Edgar Allan Poe, oo ah rukunka ugu weyn ee cabsida. Kii dambe, Stephen King oo lahaa maskax aan laga adkaan karin si uu u abuuro shaqooyin heer sare ah sida Shining ama It, iyo kuwo kale oo badan!
Waa maxay buugaagta cabsida/ugu xun ee Stephen King?
Sida laga soo xigtay Darajooyinka Barnes iyo Noble, Buugga ugu cabsida badan ee King waa Sematary Pet oo ay ku xigto - kan aan jeclahay, The Shining.
Waa inaan qiraa inaan oggolahay in Pet Sematary uu yahay buug dhiig-karka ah halka Shining-ku uu ku jiro shaki badan iyo argagax nafsiyeed.
Dhammaadka maalinta, labaduba waxay kaa dhigi doonaan inay qoyaan surwaalkaaga!
Maxay yihiin 20ka buug ee ugu naxdinta badan abid?
15kii buug ee ugu cabsida badnaa abid waxay ahaayeen hawl adag. Haddii aad eegto liisaska dhowrka ah ee ku jira internetka, waxaad ogaan kartaa in tirada cinwaanada la heli karo ay tahay wax laga naxo.
Si kastaba ha noqotee, waxaan haystaa kuwa aan jeclahay oo, sida buug argagax leh oo xamaasad leh, runtii waxaan ahay mid xulasho leh oo muhiim u ah xulashadayda. Aan sii wado liiskayga iyo sababaha aan ugu daray cinwaan kasta “15 buug oo naxdin leh abid”
Waxaa qortay Mary Shelles waxaana la daabacay 1818. Qabso koobigaaga halkan.
Frankenstein waa hadal! Buuggani wuxuu u yimid inuu jebiyo xeer kasta ama tilmaamaha argagaxa iyo sheekooyinka sayniska. Majiro goob ka noqon karta asalkaan macabre, sheeko -wadaag, iyo xiise leh.
Intaa waxaa dheer, naxariista ay akhristayaashu u kobciyaan bahalku wuxuu gaaraa heerar aan la malayn karin. Waa hubaal, waa baaq loogu talagalay aadanaha si ay u qaddariyaan dabeecaddooda mugdiga iyo dhalaalka leh.
2.Dhicitaankii Guriga Usher iyo Qisooyin Kale
Waxaa qoray Edgar Alan Poe waxaana la daabacay 1839. Qabso koobigaaga halkan.
Edgar Alan Poe wuxuu helay magaca boqorka gothic! Guushaan ma ahan mid lacag la aan ah waxayna ku bilaabatay daabacaadda buuggan xiisaha badan.
Sheekooyinkan qabow waxay ka dhex dhaceen qoys la yaqaan oo la og yahay halkaas oo dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa aysan weli ka dhicin.
Tiraabta Poe waa mid soo jiidasho iyo xamaasad leh - dhab ahaantii, kuma koobna buuggan oo keliya laakiin qayb kasta oo qoraal ah oo uu qoray!
Waxaa qoray Bram Stoker waxaana la daabacay 1879. Qabso koobigaaga halkan.
Alla qaali Dracula! Waxaad tahay buug neerfaha qaadaya. Dracula wuxuu u yimid inuu dhiso fikradda waxa aan u naqaanno vampire.
Waa bahal aad u weyn oo ku sii fidaya damaciisa nuugista dhiigga dadka aan waxba galabsan.
Su’aashaydu mar walba waa; sidee buu Stoker dhammaanteen noo jeclaaday uunka sharka ah?
4. Buuraha Waallida
Waxaa qoray HP Lovecraft. Qabso koobigaaga halkan.
Buugaagtayda naxdinta leh ee aan jeclahay waa buugga argagaxa ee nafsiga ah. Waxaan qiyaasayaa inaan aaminsanahay in jinku aanu aad nooga fogayn. Dhab ahaantii, waxaa laga yaabaa inay nagu jirto!
Buuggan cusub ee aadka u sarreeya wuxuu sahamiyaa sharnimada aadanaha ee safarka Antarctic.
Waxay ka gudubtaa buug argagax leh oo wanaagsan, waa sheeko gaar ah oo taabanaysa!
5. Ugaarsiga Guriga Hill.
Waxaa qoray Shirley Jackson waxaana la daabacay 1959. Qabso koobigaaga halkan.
Waxaan runtii jeclahay inaan la kulmo buugaag naxdin leh oo wanaagsan oo ay qoreen haweenku. Waxay caddaynaysaa inaannaan awood u lahayn oo keliya inaan qoro aayadaha nostalgic iyo sheekooyinka jaceylka jaceylka ah, laakiin aan gudaha ku qurmay si aan u soo saarno heer sare oo argagaxiso.
Taasi waa sida ay Shirley Jackson ku samaysay sheekadan halka guri la ugaarsado uu noqdo dabeecad la hubo.
6. Cilmi -nafsi
Waxaa qoray Robert Bloch oo la daabacay 1959. Qabso koobigaaga halkan.
ILAAHAYOW! (Hadalka Janice), Psycho waa bayaan kale oo sheekooyin naxdin leh.
Tani waa, waxaan aaminsanahay kalsooni, mid ka mid ah buugaagta cabsida leh ee abid. Xariifkii Alfred Hitchcock ayaa xitaa sameeyay filim.
Waallida hooyada Norman Bate ayaa horseedaysa shirqoolkan xiisaha badan ee nafsiga ah.
7. Wax si xun u socda Jidkan ayaa imanaya
Waxaa qoray Ray Bradbury waxaana la daabacay 1962. Qabso koobigaaga halkan.
Kaliya fiiri cinwaanka buuggan. Waa arrin laga naxo. Haddaba, fiiri cidda buugga qortay. Sayidkii ereyada, abuuraha ugu dambeeya ee kuwa sharka leh: Ray Bradbury.
Waxaan u malaynayaa inay taasi kugu filan tahay inaan kaa dhaadhiciyo inaad akhrido buuggan oo, kaliya inaan kugu tuuro, bilaw inaad eegto dhinaca xun ee buunbuunyada iyo carnivals -ka jecel.
8. Ilmaha Rosemary.
Waxaa qoray Ira Levin waxaana la daabacay 1967. Qabso koobigaaga halkan.
Kani waa mid ka mid ah buugaagta naxdinta leh ee ugu caansan. Waa qayb ka mid ah kor u kaca noocyada naxdinta leh tobankii sano ee 1960.
Waxay ku ciyaareysaa qaddarinta aadanaha ee qoyska iyo guriga. Waxay ku riixaysaa xadhkahayaga marna ugu murugsan!
Hal -abuur heer sare ah oo ka mid ah suugaanta xumaanta.
9. Qofka Baxsada
Waxaa qoray William Peter Blatty waxaana la daabacay 1971. Qabso koobigaaga halkan.
Waa cadaalad in la yiraahdo filimka buuggan ayaa naftayda ka baqay! Iska daa akhriska buugga.
Waxaad la seexan doontaa waalidkaa- haddii aad ag joogtid- ama dhuumatay indhahaaga oo keliya markaad dhammaysay kadib.
Buugani wuxuu tilmaamayaa waa cusub oo ku jira nooca naxdinta leh. Waxay ina tusaysaa inaan dhammaanteen nuglahay iyo in waxyaalaha ugu cabsida badani xitaa nagu dhici karaan. Iska ilaali!
Waxaa qoray Stephen King oo la daabacay 1974. Qabso koobigaaga halkan.
Carrie wuxuu ahaa sheeko-abuurkii ugu horreeyay ee uu daabacay King. Waxay ahayd talaabadii ugu horaysay ee xirfada guulaysata sida qoraa argagax leh. Waxay muujinaysaa bidhaamiyihii ugu horreeyay ee waxa boqorku yahay maanta. Waxay ka tarjumaysaa xumaanta iyo dhagarta guracan ee sida xariifnimada leh; warqad ayuu saaray.
Carrie waxay la xiriirtaa dhammaanteen oo, ka dib markii aan helnay kalsoonidayada, King wuxuu naga dhigaa inaan la silcno Carrie.
Xeelad wax -ku -ool ah oo uu u adeegsaday ku dhawaad ​​buug kasta oo uu qoro!
Waxaa qoray Stephen King oo la daabacay 1977. Qabso koobigaaga halkan.
Waxa laga yaabaa in aan halkan ugu eexdo, laakiin buuggani waa mid ay waajib tahay in la akhriyo. Waxaan hore ugu magacaabay buuga cabsida ugu fiican ee la akhriyo, oo hadda waxaan qirayaa inuu yahay mid ka mid ah buugaagta aan jeclaa abid.
Kani wuxuu ahaa buuggii ugu horreeyay ee i tusay in haa, buugaagtu ay noqon karaan kuwo cabsi badan! Sheekada Hotel Overlook iyo waalida Jack waa dhacdooyin madaxaaga ku dheggan.
Weligaa kama takhalusi kartid. Ku faraxsan taas!
Waxaa qoray Stephen King oo la daabacay 1986. Qabso koobigaaga halkan.
Kaliya ma fahmi karo sida King u maleeyo sheekooyinkan quruxda badan ee jilayaasha xun iyo macabre. Dhacdooyinkan foosha xun ee suugaanta hodanka ku ah oo kakan.
Waa gabal farshaxan argagax leh oo dhidibada u taagay sawiradii foosha xumaa ee aan wada ognahay.
Waxaa laga yaabaa inaad daawatay filimka- oo lafdhabar u ah- laakiin, aan kuu sheego, buuggu aad buu uga cabsi badan yahay filimka. Waxaan kaaga tegayaa inaad qiimeyso macluumaadkaas.
13. Aamusnaanta wanka
Waxaa qoray Thomas Harns waxaana la daabacay 1988. Qabso koobigaaga halkan.
Karaahiyo waa eray kale oo wanaagsan oo lagu tilmaamo sheekooyinka naxdinta leh qaarkood. Haa, waxaan u malaynayaa sheekadan inay tahay wax laga yaqyaqsoodo. Waxay ku saabsan tahay dad -cunis iyo dembi. Ku saabsan dabeecadaha aadanaha ee aan la taaban karin.
Tani waa taxanaha Masduulaagii cas, riwaayadda ka sheekaynaysa gacan ku dhiiglaha Dr. Hannibal.
Sheekadan, dabeecaddu waxay u muuqataa mid aan awood lahayn, laakiin waxaa jira halka uu ka tarjumayo xeeladaha ugu weyn ee maankiisa. Xeeladaha sheekada u horseeda timo-goyn!
14. Guriga Caleemaha
Waxaa qoray Mark Z. Danielewski waxaana la daabacay 2000. Qaado nuqulkaaga halkan.
Buuggan cusub wuxuu ku lug leeyahay waxyaabo badan oo ka dhiga sheeko wanaagsan. Guri la haasaawiyey, sheeko jacayl, xanuun maskaxeed, waalli.
Buugga oo shay ahaan ah wuxuu ka caawiyaa akhristayaasha inay macno u yeeshaan jilayaasha badan ee u muuqda inay is dhex galaan oo is dhexgalaan.
Waa buug weyn oo sahaminaya hal -ku -dhigga gudaha, xiisaha nafsaaniga ah, iyo, dabcan, nooca naxdinta leh.
15. Bakhtiyaanasiibka iyo Qisooyin kale.
Waxaa qoray Shirley Jackson waxaana la daabacay 2005. Qabso koobigaaga halkan.
Sheekooyinka buuggan waxaa markii hore lagu daabacay New Yorker 1948 waxayna kor u qaadeen fikrado badan oo iska soo horjeeda akhristayaasha.
Xaqiiqdu waxay tahay in ururinta sheekooyinka, ka dib, laga dhigay, buug ina tusaya sida nolosheenna caadiga ah ay dhab ahaantii u qarinayso argagaxa, naxdinta iyo waallida. Waxaan filayaa in ay taasi keentay in akhristayaashii hore ee majaladda la ammaanay ay markii hore ka naxeen.
Hadda, buuggu waa iibiyaha ugu fiican wuxuuna caddeyn buuxda u yahay in sheekooyinka naxdinta leh aysan u baahnayn jinniyo, zombies, ama bahallo. Waxay kaliya u baahan yihiin bini -aadam shar leh.
Waxaa hubaal ah in suuqa ay yaallaan buugaag kale oo badan oo naxdin leh. Laakiin, shaki la'aan, kuwa kore waa buugaagta ugu cabsida badan abid. Ma ku dari lahayd cinwaan kale liiskan?
Nala hadal qeybta faallada.
Sida Lacag Loogu Sameeyo Internetka Pakistan 2021 | 20 Siyaabo Hubaal ah
App navigation waa barnaamij softiweer ah oo ku socda taleefankaaga casriga ah ama aaladda kale ee elektiroonigga ah ee la qaadan karo iyo…